समय संगै सकारात्मक विचार धमिल्लिदै जान थाले – समाधान के त?  HamroKatha
समय संगै सकारात्मक विचार धमिल्लिदै जान थाले – समाधान के त?
हाम्रो कथा २०७५ पुष २८ गते १८:३६
यो संसारमा त्यस्तो कोही व्यक्ति छैन जो राता-रात करोडपति या सफल बनेका छन् । संसारभरीका सबै सफल व्यक्ति चाहे बिल्गेट्स होस् या मार्ग जुकरबर्ग हरेकको; सफलताको निम्ति उनीहरूले कति दिन र रात लामो मिहेनत र लगाब रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका हुँदैनौ ।
तपाईँ आफैले महसुस गर्नु भएको होला; कुनै प्रेरणादायी भिडियो या अरू केही कुराबाट प्रेरित हुनु भयो भने तपाईँ भित्र यति धेरै सकारात्मक असर देखिन्छ कि तपाईँलाई लाग्न थाल्छ कि अब; म संसार नै हल्लाई दिन्छु । समय सँगै त्यो बिचार पनि धमिल्लिदै जनथाल्छ। संसार हल्लाइदिने त्यो व्यक्ति एक-दिन पछि सोच्न थाल्छ कि दुनियाँ त धेरै टाढा छ तर यो देश भने हल्लाउन सक्छु । अनि फेरि एक हप्ता पछि उसको मनले भन्न थाल्दछ; “केटो तेरो लक्षण ठिक लागेको छैन त बाट केही हुने वाला छैन”।
आखिर तपाईँ र त्यो सफल व्यक्तिमा के अन्तर छ ? के तपाइले कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? केही समय पहिले सी.एस.बि.सी को एउटा अन्तर्वार्तामा इलोन मस्कले भनेका थिए कि; कहिले काहीँ काम गर्दा गर्दै अफिस मै निदाउँथे । उनी एक हप्तामा करिब ८० देखि १२० घण्टा सम्म काम गर्छन् । तपाईँलाई के लाग्छ? “स्पेस एक्स” र टेस्ला जस्तो कम्पनीको मालिकले पनि यत्ति धेरै काम गरिरहनु पर्ने जरुरी छ र ? र उनलाई कहाँबाट प्रेरणा मिल्छ यत्रो काम गर्न ? यो सबै उनको अवचेतन मनको कारणले गर्दा हुने गर्दछ । उनले आफ्नो दिमागलाई यसप्रकारले रिवायर (प्रोग्राम) गरेका छन् । यदि उनले यती काम गरेनन् भने अधुरो अधुरो महसुस हुन्छ उनी र उनीजस्ता सबै सफल व्यती जीवनमा एउटा कुरालाई पछ्याउछन् । र त्यो हो बानी (ह्याबिट्स) ! यस्तो बानी कि जो बिल्गेट्स,इलोन मस्क लगायत सबै सफल व्यक्तिलेमा साधारण किसिमले रहेको हुन्छ।
यस प्रकारका केही बानीहरू हामीले पनि हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छौ जुन यस प्रकार छन्:
१) सधैँ केहि न केही नयाँ गर्न खोज्नु वा सिक्नु । जस्तो कि :- देब्रे हातले ब्रस गर्नु,समय समयमा देब्रेहातले लेख्न कोसिस गर्नु। जुन तपाइको बानी नै बोनस्। जसले गर्दा तपाइको निउरोन रिवाज हुन थाल्छ र कार्यकुशलता “इफिसियन्सि “ लगातार बढिरहन्छ।
२) दृश्य अवलोकन; तपाईँ यो कुरा त सुन्दा सुन्दा थाकी सक्नु भएको होला। एउटा चेतन मन र अर्को अवचेतन मन ! हाम्रो चेतन मन कारण,तर्क अथवा प्रतिभा/योग्यता लाई सम्झेर काम गर्छ।र हाम्रो अवचेतन मन भावना, ध्वनिको भाषा, ऊर्जाको तरङ्गलाई सम्झेर काम गर्छ। यस कारण तपाईँ दिनको एक भए पनि आफ्नू मनको दृश्य अवलोकन गर्न थाल्नुहोस्।
३) बिहान उठेर केही समय भए पनि व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नु । यसले तपाईँको मोड पनि राम्रो हुन्छ र दिन भरि तपाईँ खुसी रहन हुन्छ । यसले तपाइको काम मा मन पनि लाग्छ ।
यी कुराहरू साधारण लाग्न सक्छन् तर साधारण कुरा भित्र असाधारण विषय लुकेको हुन्छ । यो कुरालाई हामीले नकार्न मिल्दैन । र यी कुराले एक दिन का निम्ति हैन । दिर्घकालीन परिणामका निम्ति नियमित बानी बसाल्नु पर्ने ह्याबिट्स हरू हुन् ।